“Mialà, O: Izay manome sakafo ho an'izao rehetra izao; Avy aminy daholo, dia izay rehetra tokony hiverina; ny tavan'ny masoandro tena izy, ankehitriny nafenina amin'ny alàlan'ny fahazavana volamena, mba hahitantsika ny FAHAMARINANA, ary hanatontosa ny adidintsika manontolo, amin'ny diantsika mankany amin'ny sezafiandriananao. ”
- Ilay Gaiyatri.
Vol. 1 21 OKTOBRA. Tsia
Ity gazety ity dia natao hanazavana izay rehetra mety hamaky ireo takelaka, ny Tmessage of the soul. Ny hafatra dia ny olombelona dia mihoatra noho ny biby tsy manan-damba, masina izy, na dia voasarona ao aminy aza ny maha-Andriamanitra azy. Ny olombelona dia tsy kisendrasendra raha tsy teraka ary tsy milalao fahatany. Izy dia fahefana, mpamorona sy mpanimba ny faritany. Amin'ny alàlan'ny hery ao anatiny dia haharesy ny tsy fahatokisan-tena, ny tsy fahalalana, ary hiditra ny fanjakan'ny fahendrena izy. Hahatsapa fitiavana ho an'izay miaina rehetra izy any. Ho hery maharitra ho an'ny tsara izy.
Hafatra tsy misy toa izany. Ho an'ny sasany dia toa tsy misy toerana amin'ity tontolo sahirana ity amin'ny fanovana, ny fifangaroana, ny fahatsapana, ny tsy fahatokisana. Na izany aza dia mino izahay fa marina ary amin'ny herin'ny fahamarinana dia ho velona izy.
"Tsy vaovao izany," hoy ny filozofa maoderina, "ny filozofia taloha nilaza izany." Na inona na inona nolazain'ny filozofia taloha, ny filozofia maoderina dia nandreraka ny saina tamin'ny fanombantombana nianarana, izay mitohy amin'ny andalana. dia hitarika honenana foana. Hoy ny mpahay siansa momba ny fitiavan-tena ankehitriny, hoy ny mpahay siansa momba ny faniriana harena. "Ny siansa dia manome fampahalalana ahy hahafahako manao zavatra ho an'ny olona eto amin'ity tontolo ity." Ny siansa ara-javamaniry dia mety hahatonga ny tany efitra misy kijana be, tendrombohitra avo, ary hanangana tanàna lehibe any amin'ny faritry ny ala. Saingy ny siansa tsy afaka manaisotra ny antony mahatonga ny tsy fitoniana sy ny alahelo, ny aretina ary ny aretina, ary tsy mahafa-po ny fanirian'ny fanahy. Mifanohitra amin'izany, ny siansa ara-materialy dia hanafoana ny fanahy, ary hamaha ny tontolo ho lasa antontam-bovoka kosmika. "Ny fivavahana", hoy ny teolojika, izay mieritreritra ny finoany manokana, dia mitondra "fiadanana sy fifaliana ho an'ny fanahy." Ny fivavahana hatreto dia nanelingelina ny saina; apetraho amin'ny olona ny ady amin'ny fiainana; nameno ny tany tamin'ny ra nalatsaka tamin'ny sorona ara-pivavahana ary nanjaka tamin'ny ady. Raha ny fombany manokana, ny teolojia dia hahatonga ny mpanara-dia azy, izay manompo sampy, mametraka ny tsy manam-petra ho endriny ary hanome azy ireo ny fahalemen'ny olombelona.
Mbola ny filozofia, ny siansa ary ny fivavahana no mpitsabo, ny mpampianatra, ny fanafahana ny fanahy. Ny filôzôfia dia miorina amin'ny olombelona rehetra; dia ny fitiavana sy ny faniriana ny saina hanokatra sy handraisana fahendrena. Amin'ny alàlan'ny siansa ny saina dia mianatra mampifandray zavatra amin'ny tsirairay avy, ary manome azy ireo ny toerana tokony hisy azy eo amin'izao rehetra izao. Amin'ny alàlan'ny fivavahana dia mivoatra ny saina amin'ny fatorana mampifangaro azy ary mitambatra amin'ny maha-olombelona tsy manam-petra.
Amin'ny ho avy, ny filozofia dia hihoatra noho ny fanatanjahan-tena ara-tsaina, ny siansa dia hihoatra ny fitiavan-karena, ary ny fivavahana dia ho lasa tsy maha-olona. Amin'ny ho avy, ny olona dia hanao zavatra araka ny rariny ary ho tia ny rahalahiny tahaka ny tenany, tsy noho ny faniriany hahazo valisoa, na matahotra ny afobe mirehitra, na ny lalàn'olombelona: fa satria ho fantany fa anton'ny namany izy, ary ny namany dia ampahany iray manontolo, ary iray ihany izy: tsy handratra ny hafa izy raha tsy mandratra ny tenany.
Ao anatin'ny ady amin'ny fisiany izao tontolo izao dia mifamily ny lehilahy amin'ny ezaka ataon'izy ireo hahatrarana fahombiazana. Rehefa nahatratra izany tamin'ny vidin'ny fijaliana sy ny fahantrana izy ireo dia mijanona ho tsy afa-po. Mikatsaka endri-javatra iray izy ireo, manenjika endrika mamirapiratra izy ireo. Tsy azon'izy ireo izany.
Ny fitiavan-tena sy ny tsy fahalalany no mahatonga ny fiainana ho nofinofy mazava sy eto an-tany ho toy ny helo mirona. Ny fidradradradra ny fanaintainana dia mihetsika amin'ny fihomehezana ny pelaka. Ny felam-pifaliana no arahin'ny fahatsapana alahelo. Ny olombelona dia mifamihina sy mifikitra mafy amin'ny antony mahatonga ny alahelony, na dia notazonin'izy ireo aza. Ny aretina, ny felan'ny fahafatesana dia mamely amin'ny vitany. Ary eo dia henoina ny hafatry ny fanahy. Ity hafatra ity dia hery, fitiavana, fandriampahalemana. Ity no hafatra hoentintsika: ny hery hanafaka ny saina amin'ny tsy fahalalana, ny fitsarana an-tendrony ary ny fitaka; ny herimpo hikatsaka ny fahamarinana amin'ny endrika rehetra; ny fitiavana mifanaja enta-mavesatra; ny fandriam-pahalemana tonga amin'ny saina afaka, ny fo misokatra ary ny fahatsapana fiainana tsy manam-petra.
Aoka izay rehetra mandray ity hafatra ity Izay manana "Ny Teny" zavatra hanome izay mahasoa ny hafa dia asaina mandray anjara amin'ny pejy.